छोराछोरी भएकि बिमकलाले बच्चा किन चोरिन? फिल्मी कथा भन्दा फरक छैन… हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > छोराछोरी भएकि बिमकलाले बच्चा किन चोरिन? फिल्मी कथा भन्दा फरक छैन… हेर्नुस्
छोराछोरी भएकि बिमकलाले बच्चा किन चोरिन? फिल्मी कथा भन्दा फरक छैन… हेर्नुस्
पाल्पा। शुक्रबार दिउँसो पाल्पाको प्रभासस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट जन्मेको ४ घण्टामै नवजात शिशु चोरी भयो । एक महिलाले ती शिशुलाई लिएर भागेको पाइएपछि उनको खोजी तीब्र बनाइयो । खोजीका क्रममा प्रहरीले शनिबार बिहान स्याङजाबाट बिमकला पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो । बिमकला अधबैंसे महिला हुन् र उनका छोराछोरी पनि छन् । छोराछोरी भइसकेकी महिला बिमकलाले बच्चा किन चोरिन् त ? यसको कारण कुनै फिल्मी कथाभन्दा कम छैन ।
स्याङजाको गल्याङ नगरपालिका मोहनडाँडा घर भएकी बिमकला विवाहित हुन् र उनका सन्तान छन् । तर, उनका सन्तान जन्माउने श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ । श्रीमानको मृत्यु भएपछि बिमकलाले एक वर्षअघि दाङका एक युवकसँग प्रेमविवाह गरेकी थिइन् । उनका दोस्रा पति वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । सामाजिक संजालबाट प्रेम भएपछि उनीहरुले बिहे गरेका हुन् ।
बिमकला कालीगण्डकी ए जलविद्युतको परियोजना कार्यालय मिर्मीमा सफाइ कर्मचारीको रुपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् र उनी त्यहीँ कर्मचारी क्वाटरमै बस्छिन् । बिमकलाले झण्डै ८–९ महिना अघिदेखि आफू गर्भवती भएको बताएकी थिइन् । उनका छिमेकीहरुले पनि उनी गर्भवती भएको विश्वास गरेका थिए किनकि छिमेकीहरुले उनको पेट बढेको देखेका थिए । सम्भवतः उनले पेटमा कपडा राखेर पेट बढाएकी थिइन् । उनले विदेश गएका श्रीमानलाई पनि आफू गर्भवती भएको बताएकी थिइन् ।
उनले सबैलाई आफू गर्भवती भएको भने पनि उनी वास्तवमा गर्भवती भने थिइनन् । सम्भवतः उनले दोस्रो बिहे गरेका श्रीमानले आफूलाई नछोडुन् र छोडीहाले पनि उनको सम्पत्तिको हकदार आफूसँग भएपछि सम्पत्ति हात पार्न सकुँ भन्ने उद्देश्यले आफू गर्भवती भएको बताएको अनुमान गरिएको छ । बिमकला गर्भवती हुन चाहेको तर नसकेकोले गर्भवती भएको नाटक गरेको हुनसक्ने पनि अनुमान छ ।
गर्भवती भएको हल्ला चलाएकी बिमकलाको यो हल्ला अब चल्नेवाला थिएन । उनले चलाएको हल्लाअनुसार बच्चा जन्मिने बेला भइसकेको थियो तर उनी गर्भवती नै थिइनन् । त्यसैले आफू गर्भवती भएको र बच्चा जन्माएको प्रमाणित गर्न उनी बच्चाको खोजीमा आएकी थिइन् । उनी ४–५ दिनदेखि अस्पतालको सुत्केरी वार्डमा बसिरहेको त्यहाँ भएका बिरामी र कुरुवाहरुले बताएअनुसार उनी त्यहाँ बच्चा चोर्ने नियतले नै आएकी थिइन् । उनले बच्चा चोर्ने उचित मौका नपाउँदासम्म दाउ हेर्दै झण्डै ४ दिन बसिन् । जब मौका पाइन्, उनी बच्चा लिएर फरार भइन् ।
के कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले नै नमानेका हुन् त?
राजधानीमै घर भाडा छुट दिनु भन्दा घरबेटिको यस्तो हर्कत, परे अचम्ममा!
भारत राजस्थानको यो आश्रममा किड्नी, क्यान्सर लगायत २९ रोग चटक्कै निको हुन्छ । ५० जना नेपाली निको भएर फर्किए (भिडियो हेर्नुस)